မြှုတ် -, Ltd. နန်ကျောက်မီးသွေးသုတေသန Keming စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်
ထို့အပြင် aircrete, foamed ကွန်ကရစ်, foamcrete, ဆယ်လူလာပေါ့ပါးကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်လျှော့ချသိပ်သည်းဆကွန်ကရစ်အဖြစ်လူသိများမြှုပ်ကွန်ကရစ်, ပလတ်စတစ်မော်တာသို့ entrained 20% (အသံအတိုးအကျယ်နှုန်း) အမြှုပ်တစ်နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူတစ်ဦးဘိလပ်မြေအခြေစိုက် slurry အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။  အဖြစ်အများအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမကြမ်းစုစုပေါင်းရေမြှုပ်ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်မှန်ကန်သောအသုံးအနှုန်းအစားကွန်ကရစ်မော်တာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်, ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာ "foamed ဘိလပ်မြေ" ဟုခေါ်နိုင်ပါသည်။ ရေမြှုပ်ကွန်ကရစ်၏သိပ်သည်းဆများသောအားဖြင့် / m³ 1600 ကီလိုဂရမ် 400 ကီလိုဂရမ် / m³ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါသိပ်သည်းဆပုံမှန်အားဖြင့်အပြည့်အဝသို့မဟုတ်ရေမြှုပ်နှင့်အတူဒဏ်ငွေစုစုပေါင်း၏တစိတ်တပိုင်းအစားကထိန်းချုပ်ထားသည်။
အချို့သောပေးသွင်းအလွန်ပေါ့ပါးတဲ့ရောသမမွှေများအဘို့ရေမြှုပ်အေးဂျင့်နှင့်အတူစင်ကြယ်သောဘိလပ်မြေနှင့်ရေအကြံပြုပေမယ့် Foamed ကွန်ကရစ်ပုံမှန်အားဖြင့်, ဘိလပ်မြေတစ် slurry ပါဝင်ပါသည်နှင့်ပြာများသို့မဟုတ်သဲနှင့်ရေပျံသန်း။ ဤသည် slurry ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံတစ်ဒြပ် aerated ရေမြှုပ်နှင့်အတူနောက်ထပ်ရောထွေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရေမြှုပ်နေတဲ့မီးစက်ကနေရေနှင့်လေထုနှင့်အတူရောနှောနေတဲ့မြှုတ်အေးဂျင့်ကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး။ အဆိုပါမြှုတ်အေးဂျင့်ကိုအသုံးပြုလေ, ဖော်စပ်အားမရခြင်းနှင့် hardening ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဖြစ်စဉ်များမှခံနိုင်ရည်တည်ငြိမ်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူသှထုတ်လုပ်နိုင်ဖြစ်ရပါမည်။
Foamed ကွန်ကရစ်အရောအနှောကိုသွန်းလောင်းသို့မဟုတ် pumped မှိုသို့, ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒြပ်စင်သို့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါရေမြှုပ်မှုအမြှုပ်ပူဖောင်း၏ thixotropic အပြုအမူမှလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းနိုင်ရန် slurry ဖွတစ်ခုကိုအလွယ်တကူရွေးကောက်တော်မူသောပုံစံသို့မဟုတ် mould.The viscous ပစ္စည်းသို့သွန်းလောင်းခံရဖို့ခွင့်ပြုခိုင်မာအောင် 24 နာရီအထိလိုအပ်ပါတယ် (သို့မဟုတ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာနှစ်ခုအဖြစ်နာရီလျှင်ရေနွေးငွေ့ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အပူချိန်တက်မှ 70 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်အတူကုသပေးခဲ့၏။ ), အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆများအပါအဝင် variable တွေကိုပေါ် မူတည်. ။ ခဲနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ယင်းဖွဲ့စည်းခဲ့အသီးအနှံယင်း၏မှိုကနေဖြန့်ချိနိုင်ပါသည်။
Foamed ကွန်ကရစ်အသီးသီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 N က 10 / mm²7ရက်ကြာအားသာချက်များနှင့်အတူ, / m³ 400 1600 မှကီလိုဂရမ်ခြောက်သွေ့တဲ့သိပ်သည်းဆထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ foam ကွန်ကရစ်မီးကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏အပူနှင့်အသံ insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများအဆာကိုပယ်ရန်, ကြမ်းပြင်များနှင့်ခေါင်မိုးကာကှယျကနေ, ရည်ရွယ်ချက်များ၏ကျယ်ပြန့ထိုသို့စံပြပါစေ။ ဒါဟာအစတုတ်ကျင်း reinstatement များအတွက်အထူးအသုံးဝင်သည်။
ရေမြှုပ်ကွန်ကရစ်များ၏ applications များ၏အနည်းငယ်နေသောခေါင်းစဉ်:
precast မြို့ရိုးကိုဒြပ်စင် / ပြား
ကိုနှင်ထုတ်-In-situ / သွန်း-In-ရာအရပျမွို့ရိုးကို
insulator တွင်လည်းကြမ်းပြင် screeds
insulator တွင်လည်းခေါင်မိုး screeds
အကြံအဖန်တွေချည်း insulator တွင်လည်းပျဉ်ပြား
foam ကွန်ကရစ် aerated ကွန်ကရစ် autoclave နှိုင်းယှဉ်အတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့သောရိုးရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းနဲ့စွယ်စုံအဆောက်အဦးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ slurry ရောနှောအတွက်ယင်ကောင်ပြာအသုံးချဖို့အမြှုပ်ကွန်ကရစ်ဒြပ်ပေါင်းများနေဆဲစျေးသက်သက်သာသာဖြစ်တယ်, ဒီထက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ foam ကွန်ကရစ်လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်. / m³ 1600 ကီလိုဂရမ် / m³ 200 ကီလိုဂရမ်ကနေသိပ်သည်းဆအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နေသည်။ ပိုမိုပေါ့ပါးသိပ်သည်းဆထုတ်ကုန်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားသို့ဖြတ်ခံရလိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်ကွန်ကရစ်တစ်ပုံစံ (လေနှင့်အတူစုစုပေါင်းအစားထိုးသှ) စဉ်းစားသည်စဉ်တွင်၎င်း၏အဆင့်မြင့်အပူနှင့်အသံကာကှယျအရည်အသွေးတွေကသမားရိုးကျကွန်ကရစ်ထက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလျှောက်လွှာပါစေ။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတိုင်အောင်, ရေမြှုပ်ကွန်ကရစ်မြင့်သောကျုံ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူအားနည်းခြင်းနှင့် Non-အကြမ်းခံအဖြစ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်အလွန်နိမ့်သိပ်သည်းဆ (ထက်နည်း 300 ကီလိုဂရမ် / m³ခြောက်သွေ့တဲ့သိပ်သည်းဆ) အဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ applications များဆောင်သောဝန်ထုတ်လုပ်ဘို့မသင့်တော်ဂုဏ်သတ္တိများရှိခြင်းမြှုပ်ကွန်ကရစ်အတွက်ရလဒ်ကတော့မတည်မငြိမ်မြှုပ်ပူဖောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ foamed ကွန်ကရစ်သို့ entrained လေနဂိုအတိုင်းနှင့်အထီးကျန်ရှိနေဆဲနှင့်အရှင်ပျက်ပြယ်ကြားရှိဘိလပ်မြေငါးပိ၏ permeability တိုးမြှင့်မတစ်ချိန်တည်းအလွန်သေးငယ်သောယူနီဖောင်းပူဖောင်းမှာတည်ငြိမ်တွင်ပါရှိသောကြောင်းသေချာစေရန်ထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါသည်။
အဆိုပါဒြပ်-အင်ဇိုင်းကိုအခြေခံပြီးမွှုပျထအေးဂျင့်များ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး, ရေမြှုပ်တည်ငြိမ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, admixtures နှင့်အထူးပြုမြှုပ် Generating တိုးမြှင့်ဖော်စပ်နှင့်ချပေးဖြစ်နိုင် 75 ကီလိုဂရမ် / m³ density.The အဖြစ်အလင်းအဖြစ်ထုတ်လုပ်ရာတွင်, အရေမြှုပ်၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဤအရပ်မှအမြှုပ်ကွန်ကရစ်တိုးတက်လျက်ရှိသည် အင်ဇိုင်း biotechnological မူရင်းအလွန်အမင်းတက်ကြွပရိုတိန်းပါဝင်ပါသည်နှင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း foamed ကွန်ကရစ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, စီးပွားဖြစ်အဆောက်အဦးများ, ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆောက်အဦးများ, စာသင်ကျောင်းများ, တိုက်ခန်းများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဂျာမဏီအဖြစ်နိုင်ငံများတွင်အိုးအိမ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ပြီး hydrolysis.In ဟာဆွဲဆောင်မှုမရှိပရိုတိန်းအပေါ်အခြေမခံ အမေရိကန်နိုင်ငံ, ဘရာဇီး, စင်္ကာပူ, အိန္ဒိယ, မလေးရှား, ကူဝိတ်, နိုင်ဂျီးရီးယား, ဘော့ဆွာနာ, မက္ကစီကို, အင်ဒိုနီးရှား, လစ်ဗျား, ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ, အယ်လ်ဂျီးရီးယား, အီရတ်အဲဂုတ္တုပြည်။